भनिन्छ, घरको सुरक्षा, मालिकको सुरक्षा तथा विभिन्न सौखले आजकाल धेरै मानिसले आ–आफ्नो घरमा कुकुर पाल्ने गर्छन् । विशेष गरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले गर्दा मानिसहरूले कुकुर पाल्छन् । कुकुर पाल्नु भनेको सानोतिनो कुरा होइन । खर्चका हिसाबमा पनि करिब एउटा साधारण जातको कुकुर पाल्न मासिक १० देखि १२ हजार कुकुरलाई खर्च लाग्ने मानिसहरू बताउँछन् । नुहाउने साबुन, स्याम्पु, खानाका लागि प्रत्येक दिन मासु, मासिक कुकुरको स्वास्थ्य परीक्षण र लाग्ने खोपसहित खर्च हुने गर्छ ।
अझ महँगा–महँगा जर्मन सेफर, इङ्लिस बुल डग, भोटे, गोल्डेन रिट राइडर, जापनिज स्पिचजस्ता कुकुरहरू पाल्न धेरै खर्चिलोसमेत हुने मानिसहरू बताउँछन् । अहिले प्रत्यक घर–घरमा कुकुर पाल्ने व्यक्तिहरूले नगरपालिकाको निर्देशनअनुसार कुकुरको पहिचान गरी ट्यागको व्यवस्था गरेको छ भने नगरपालिकाले पनि जथाभावी कुकुरलाई सडकमा दिसा–पिसाब नगराउन पटक–पटक आग्रह समेत गरेको छ ।
तर तपाईं–हामी आफैं गम्भीर भएर सोचौं त, के समाजमा बस्ने धेरै मानिसको व्यवहार सभ्य छ त ? कुकुर पाल्ने सबै मानिसले उचित शौचको व्यवस्था गरेका छन् त ? कुकुरहरूलाई कतै साँझपख तथा बिहान नगरपालिकाको आँखा छली सडकतिर दिसा–पिसाब त गराइरहेका छैनन् ? हो, यस्ता असभय मानिसहरू हाम्रै समाजमा पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्, जसले जानी–जानी सडकमा खुलेआम कुकुरलाई दिसा–पिसाब गराउँछन् ।
हो, सभ्य नागरिकको परिचय तपाईं–हामीले नै दिने हो । सर्वप्रथम तपाईं–हामी सभ्य भए समाज सभ्य रहन्छ, समाज सभ्य भए गाउँ सभ्य रहन्छ र गाउँ सभ्य रहे देश सभ्य रहन्छ । त्यसैले आजैबाट आफ्ना घरपालुवा कुकुरहरूलाई सडकमा होइन, आफ्नै शौचालयमा दिसा–पिसाब गराऊँ । तर, आज त्यसको ठीक उल्टो अवस्था भएको अनुभूति हुन्छ । ग्रामीण भेग तथा राजधानीका आसपासका ठाउँहरूमा खुलेआम रूपमा घरपालुवा कुकुरहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सडकमा वा सडकका झाडीहरूमा अव्यवस्थित रूपमा कुकुरहरूलाई शौच गराइएको भेटिन्छ । यसले सडक फोहोर हुनुका साथै वरपरको वातावरणसमेत दुर्गन्धित हुन पुग्छ । फोहोरका कीटाणुहरू फैलिन्छन् भने रोगहरूसमेत लाग्ने खतरा हुन्छ ।
यसमा सम्बन्धित निकाय अथवा सचेत नागरिकले नै समस्याको समाधान गर्नु जरुरी हुन्छ । आमसर्वसाधारण भन्छन्, “घरपालुवा कुकुरहरूले गर्दा सडक फोहोर हुने, दुर्गन्धित बनाउने हुनाले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । हजारौं खर्च गरेर कुकुर किन्न सकिने, पाल्न सकिने तर कुकुरका लागि उचित शौचालयको व्यवस्था गर्न नसक्ने ?”
देशका धेरै ठाउँ, जस्तै बढी सहरहरू भएको जिल्लामा यस्ता कुरा नियन्त्रण भएका छन् । कोही हुँदै छन् त अझै कोही भने लुकीछिपी खुलमखुल्ला सडकमा दिसा–पिसाब गराउने गर्छन् ।
यस्तो कार्य राम्रो मानिँदैन । यो कार्यको सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । आफ्नै घरको कम्पाउन तथा कुनै निश्चित ठाउँ वा शौचालयमा नै कुकुरहरूलाई शौच गर्ने बानी बसाल्नु जरुरी हुन्छ । तपाईं एक जनाले गर्दा अरू धेरै मानिसलाइ असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको मनन गरौँ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आजैबाट कुकुरहरूलाइ उचित शौचको व्यवस्था गरौं । सभ्य नागरिक अनि सभ्य समाज निर्माणमा तपाईं–हामी सबैले हातेमालो गरौं ।
सम्बन्धित निकायले पनि आ–आफ्नो ठाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, सार्वजनिक स्थल, सडकलगायतका ठाउँहरूमा अव्यवस्थित रूपमा शौच गराए कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, छाडा छाडिएका कुकुरहरूको कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सार्नु जरुरी देखिन्छ ।